मेलम्चीको लाभांश बाँडफाँट कसरी ? - Sabaiko.news
मेलम्चीको लाभांश बाँडफाँट कसरी ?
Posted on March 14, 2018,3a.m.
कुनै विपत्ति आइनलागेमा २०७५ सालमा मेलम्ची नदीले बाटो बदल्नेछ। मेलम्ची आयोजनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन भएको ४२ वर्षपछि योजनाले मूर्तरूप पाउन लागेको हो। अनेकन झमेला पार गर्दै अन्त्यमा इटालियन निर्माण कम्पनीले भुत्ते औजार प्रयोग गरेरै भए पनि सुरुङ खन्ने काम लगभग अन्तिम भएको खबर बाहिर आएको छ।
उपयुक्त पिउने पानीको अभाव व्यहोरिरहेका काठमाडौंवासीलाई यो आयोजनाले त्राण देला अथवा आयोजनामा हुन गएको ठूलो लगानी उठाउन पानीको मूल्यमा हुन जाने वृद्धिले फेरि पनि थोरै आम्दानी हुनेलाई पहिलेको भन्दा पनि अप्ठ्यारो पर्ला ? मेलम्ची उपत्यकाको सौन्दर्य, हावापानी अनि मेलम्चीवासीको जीवन र जीविकाको अभिन्न आधार मेलम्ची नदी नहुँदा मेलम्चीवासीलाई कस्तो असर पर्ला ? आगामी दिनमा देखिँदै जानेछन्।
सामान्य उदाहरण लिऔं, आयोजनाको सुरुङ मार्ग खन्ने क्रममा प्रयोग गरिएको सडक मार्गमा आयोजनाको गाडी गुडिरहेको छ। तर यति ठूलो आयोजनाको प्रवेश मार्गमा धुलो नउडोस् भन्नाका लागि पानी हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। पक्कै पनि सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा यस विषयमा उल्लेख हुनुपर्छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले यति सानो सामान्य काम पनि गरेको छैन। यो सोह्रै आना आयोजना र कम्पनीको हेपाइ हो, जसले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गएको छ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं नपु¥याउँदै याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौं लाने चुरीफुरी सुरु भइसकेको छ। यो पानी खुवाउने पवित्र उद्देश्यले भन्दा पनि आयोजनाबाट तर मार्ने प्रवृत्तिको चुरीफुरी हो। यो देशमा निर्माण कार्य नागरिकको सजिलोको लागि हैन, सीमित मानिसको स्वास्थ्य अझ भनौं पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि बनाइन्छ। मेलम्ची नदी जतिखेर काठमाडौं ल्याउने भनेर छलफल सुरु भयो, त्यतिखेर सायद यो निकै झरिलो र भरिलो थियो। अहिले यो नदीको पानी यसरी सुक्दै गएको छ कि यो फरक एउटै पुस्तामा देखिएको छ। नदी विरक्त लाग्ने गरेर सुगर लागेको बिरामी जस्तै सुक्दै गएको छ। यसरी नदी सुक्नुमा जलवायु परिवर्तनको मात्र असरले हो भन्नु कच्चा ठम्याइँ हुन्छ।
मेलम्ची नदीको मुहानभन्दा माथिको भागमा र यसका सबै जलाधारीय क्षेत्रमा जुन किसिमको वृक्षरोपण एवं वातावरणीय संरक्षणको काम हुनुपर्ने हो, यो काम पटक्कै भएको छैन। यसले हाम्रा योजनाकारको टाउको कति फराकिलो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा सिन्को नभाँचिएको यथार्थ त छ नै, मेलम्ची र इन्द्रावती नदीलाई यसरी चिथोरिँदैछ कि यही क्रमले चिथोरिरहने हो भने यसको जीवन नै समाप्त हुनेछ। अनियन्त्रित रूपमा जुन हिसाबले बालुवा र गिटीको निकासी भइरहेको छ, यही क्रम निरन्तर रहिरहेमा अहिलेको मुहान सार्नुपर्ने र जतिसुकै ठूलो ड्याम बनाए पनि काम नलाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
मेलम्ची नदी काठमाडौंतर्फ लैजाने दिन प्राविधिक हिसाबले अब टाढा नदेखिए पनि अहिलेसम्म मेलम्ची भेगको सरकार र त्यहाँका जनताले पाउने लाभांशको बारेमा टुंगो लागेको छैन।
मेलम्ची–इन्द्रावती नदीमा जुन किसिमको दोहन भइरहेको छ यो अत्यासलाग्दो छ। कुन–कुन व्यक्ति वा कम्पनीले कहाँबाट अनुमति लिएका हुन् ? कति समयलाई अनुमति दिइएको हो ? त्यसले कुन निकायलाई कति राजस्व बुझाएको छ ? सर्तहरू केके हुन् ? यस विषयमा प्रभावकारी खालको सूचना प्रणालीसम्म छैन। यो बाँदर लीला स्थानीय सरकार आएपछि कम होला कि भन्ने जनअपेक्षा पनि मर्दै गइरहेको छ। नदीको बालुवा–गिट्टी प्रयोग गरिनुपर्छ तर नदीको जीवन रहने सर्तमा पारदर्शी तवरले। तर यस्तो भइरहेको छैन।
सार्वजनिक हितका नाममा राज्यले नागरिकका जग्गा अधिग्रहण गर्छ। बाटो बनाउँछ। एयरपोर्ट बनाउँछ। तर यी संरचना ठेकेदार र व्यापारीको नाफा कमाउने एक मात्र उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन्छन्। मेलम्चीको बाटोको हाल पनि त्यस्तै छ। केही वर्षपहिले पिच भएको बाटोमा बालुवा र गिट्टी बोकेका ट्रकहरू यति गुडाइए कि पिचको कुनै नामोनिसान छैन। उल्टै ठूलाठूला खाडल निर्माण भएका छन्। स्थानीय तहले ती व्यापारीलाई थप कर लगाउन सक्थ्यो होला ? बाटोमा गिटी भर्न आदेश दिन सक्थ्यो होला। बाटो कति बिग्रिएको छ भने एम्बुलेन्समा बिरामीलाई अस्पताल लैजाँदा हुने सास्तीले आउने जोखिम भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा छ। बाटो बन्यो। जनताको जग्गा काटिए। तर स्थानीयलाई फाइदा भएन। धुलोको सास्ती मात्र भयो। नाफा क्रसर उद्योगका मालिक र ट्यांकर व्यवसायीले लिइरहेका छन्।
यस क्षेत्रका समुदायलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले सामाजिक उत्थान कार्यक्रम लागू भएको छ र सुनेअनुसार बर्सेनि ७÷१० करोड रुपैयाँ यो क्षेत्रमा गइरहेको छ। यसका लागि ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची सामाजिक उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति पनि अस्तित्वमा छ। तर यो कार्यक्रमको मोडालिटीमा पुनर्विचार गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। कार्यक्रमको खुला प्रतिस्पर्धाबाट मूल्यांकनकर्ता छनोट गरी यसको प्रभावबारे मूल्यांकन आवश्यक छ। कम्तीमा अहिले नै पनि के भन्न सकिन्छ भने अबको बजेट सोझै स्थानीय तहमा जानुपर्छ। स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियामा समेटिनुपर्छ। यो स्थानीय निकाय नहुँदाको विकल्पको रूपमा लिइएको थियो।
मेलम्ची नदी काठमाडौंतर्फ लैजाने दिन प्राविधिक हिसाबले अब टाढा नदेखिए पनि अहिलेसम्म मेलम्ची भेगको सरकार र त्यहाँका जनताले पाउने लाभांशको बारेमा टुंगो लागेको छैन। वा यस विषयलाई सरकारी पक्षले गौणरूपमा लिएको छ। प्रचलित व्यवस्था, नियम–कानुनलाई आधार मानेर यो विषय टुंग्याइएन भने सबै निर्माण कार्य भएर पनि पानी काठमाडौं नआउने अवस्था हुन सक्छ। यो विषयमा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार र आयोजना पक्षबीच द्वन्द्व आउने खतराबाट जोगिन जनप्रतिनिधिको पहलमा यो विषय टुंग्याउन बितिसकेको छ।
अवश्य पनि मेलम्ची नदीको परम्परागत बहाव रोकिएपछि यहाँको हावापानी वातवरण जनजीविका र समृद्धिमा नकारात्मक असर पर्नेछ। यसलाई कम गर्ने उपायबारे आजैबाट सोचिनुपर्छ। यसका लागि जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा लगानी प्रमुख पक्ष हो। निश्चित प्रतिशत पानी त छोड्नैपर्छ। जथाभावी भौतिक निर्माण र नदीको दोहनको नियन्त्रण हुनैपर्छ।
इन्डोनेसियाली प्रेमिकाको हत्यापछि एक नेपाली मलेसियाबाट फरार
एक सय ४७ विद्यार्थी एसईई परीक्षाबाट वञ्चित
तीन घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय
धनुषामा ८ वर्षीय बालकको हत्या
आठ वर्षीय बालकको 'अपहरण'पछि हत्या
जेठाजुबाट बुहारीलाई मिर्गौला दान
‘सांसद’ दीपक मनाङेविरुद्ध प्रहरीले जारी गर्‍यो रेड कर्नर नोटिस
मापदण्ड बिनै सडक खन्दा फेवाताल संकटमा
1 आगलागीमा ७० घर नष्ट, १८ चौपायाको मृत्यु
2 सरकारसँग एक महिलाको गुहार
3 सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट भागेका कैदी काठमाडौंमा पक्राउ
4 मनाङेलाई खोज्न गएको प्रहरीले मोबाइल मात्र भेट्टायो
5 पूर्वगृहमन्त्री खड्का चढेको गाडी दुर्घटनामा